Tambajotra Mihari: ilaina ny fifampidinihana mikasika ny jono makamba | NewsMada
Tambajotra Mihari: ilaina ny fifampidinihana mikasika ny jono makamba
Naneho hevitra ny vovonana fikambanan’ny mpanjono madinika, ny Tambajotra Mihari, mampihatra ny Lamina enti-mitantana ny morontsiraka sy ny an-dranomasina (LMMA). Niaraka naneho ny ahiahiny, omaly, ny filoha nasionaly, sady misahana ny Mihari tapany avaratra andrefana, Manahadraza Hermany sy ny filohan’ny tapany atsimo, Ramadany Edmond, mikasika ny hamoahan’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), fahazoan-dalana manjono makamba miisa 50 ho an’ny mpandraharaha malagasy, manomboka ny 10 mey ho avy izao. Ahiahin’izy ireo ny tsy fahalalana raha mpandraharaha voafantina na tsia ireo 50 ireo. Tsy fantatra ny fanajana ny fepetra, ny fitaovana ampiasaina (harato, sambo, ….) amin’ny fiarovana ny harena an-dranomasina, toy ny vatohara, ny ala honko, sns. Tsy fantatra ny tombontsoa azon’ny mponina eny ifotony amin’ity fepetra ity.
Sambo vahiny manjono tsy ara-dalàna
Manoloana ireo, mangataka ny mpitantana ny LMMA ny hisian’ny fifampidinihana sy ny ihainoan’ny fanjakana azy ireo, mialoha ny fandraisana fanapahan-kevitra. Mila haverina ny fifanakalozan-kevitra ny “motion 3”, mitsinjara ny fari-dranomasina ho an’ny madinika sy ny vaventy. Takin’izy ireo koa ny fahazoana mijery ny bokin’andraikitry ny mpandraharaha tsirairay.
Ankoatra ireo, manaitra ny fanjakana ny Mihari, fa misy foana ny sambo vahiny mihaodihaody, manjono tsy ara-dalàna any amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara amin’ny alina. Voakasik’izany any Atsimo Andrefana sy ny any Nosy Be, Antsiranana, Ambanja, sns. Raha ny fahalalan’ny filoha Ramadany azy, sambo avy any Kaomoro, Mayotte, Thailande ireo sambo any avaratra ireo. Ripaka koa ny ala honko any Ambanja hanaovana saribao sy trano “bungalow”any Nosy Be.